Sh Kenyaawi fursada uu haysto ma uga faaiideysan doonaa inuu ka hadlo argagixisada shabaab - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Sh Kenyaawi fursada uu haysto ma uga faaiideysan doonaa inuu ka hadlo argagixisada shabaab
Sh Kenyaawi fursada uu haysto ma uga faaiideysan doonaa inuu ka hadlo oo dadka dhalinta ka waaniyo argagixisada shabaab mise waxa uu kodhisanaya taageereyaashiisa diimeed. Dabcan aruinta taagan waa khatarta ay dalka iyo dadka ku hayaan kooxaha gaaleynta Muslimiinta oo isaga laftiisa gaalayn doona.
Waxaanse is weydiiyay maxaa u diidey culimada inay waaqica jira ka hadlaan oo had iyo doortaan uga warwareegaan oo maraca qaarkood arkeyso in kuwa hoos fadhiya dawlada ay yihiin kuwan hoosta kala jira kooxaha gaaleynta Muslimiinta.
Way yartahay culimada fadhiya masaajida magaalooyinka Somaliyeed min Saylac ilaa Kismaayo inay si toosa uga hadlaan waaqica jira iyo dhalinta beenta loogu sheegay inay isqarxiyaan si janada u galaan.
Waxaan ku jirin musheykhda gobolada dhexe siiba Galguduud.
Su’aasha aad is weydiin karto ayaa ah Sh Kenyaawi ma taaban doonaa arinta taagan ee waaqica ah mana u sheegi doonaa dhalintu inay la shaqeeyaan dawlada oo ay tahay waajib diiniya, inay soo sheegaan halka kooxaha gaaleyntu ku sugan yihiin, ayna jihaadka dhinacooda ka galaan, mise wuxuu ku ekaan doonaa wacyiga guud ee hore loo daawadey.
Waxa xaqiiqa meel amni ka jirin inaan diin ka jirin, taas dhalinta ma u sheegi doonaa gabdho iyo wiilalba, maka waanin doonaa dhaqamada urur diimeedyada Carabta ee dalka ku faafiya ee ay faafiyaan wadaado lacago ku soo qaatey.
Shaki Kuma Jiro dhibka ugu weyn maanta inuu yahay amni xumada iyo xoriyad la’aanta ka jirta goobaha ay joogaan argagixisada, waana sababta Sh Kenyaawi u doortey Muqdisho, wuxuuna ogyahay in diini ka jirto, diintuna tahay aabaha xoriyada, sharafta qofka Muslimka, ee uu Allahiis ku caabudayo ayadoo qori qoorta looga hayn.
Allow culimadeena tus nidaamka wacyigelinta waaqica ku dhisan. Waase nasiib daro haddii uu dhalinyaradaa u imaanaya Jimcaha ee intooda badan bilaa camalka ayna maqlin kalmada la shaqeeya dawlada lana dagaalama argagixisada.